Obani Abalaleli Bakho Bangempela? | Martech Zone
Obani Abalaleli Bakho Bangempela?
NgoMsombuluko, Ephreli 5, 2010 NgoMgqibelo, Juni 27, 2015 Douglas Karr
Njengoba ubhala okuqukethwe kwakho noma ujoyina izingxoxo ngemithombo yezokuxhumana, uyazi yini ukuthi ngubani ongafunda, abukele futhi aqaphele? Amabhulogi ezinkampani amaningi nama-personas engiwabona ezinkundleni zokuxhumana asobala, kepha mhlawumbe aqonde kancane phambili.
Kubalulekile ukukhumbula ukuthi izithameli eziyinhloko akuzona zonke izethameli zakho ku-intanethi. Izithameli zakho eziyinhloko zingaxhumana nawe futhi zibambe izingxoxo nawe nsuku zonke - kepha yibo abambalwa. Izithameli zakho zesibili, ezingabonakali empeleni iningi. Bafunda buthule, bathatha amanothi futhi bahlulele ukuthi baqhubekele phambili noma cha.
Izithameli Zakho Kungenzeka
Inkampani elandelayo noma usomabhizinisi ehlola ukuthi angakuqasha noma cha.
Ochwepheshe bezezimboni abanquma ukuthi ungumholi noma cha.
Abaholi benkomfa bakulinganisa ngamathuba okubandakanya ukukhuluma.
Mhlawumbe umshicileli wencwadi enquma ukuthi okuqukethwe kwakho kungaba okuqukethwe kwencwadi.
Umphathi wakho nabantu osebenza nabo.
Abangani bakho nomndeni wakho.
Ofuna ukwazi onentshisekelo kwimikhiqizo nezinsizakalo zakho.
Isisebenzi esinombono noma umlingani webhizinisi.
Yimuphi umyalezo ozama ukuwudlulisa kulezi zilaleli? Ingabe unayo indlela yokuzibandakanya nohlobo ngalunye lwezithameli? Ingabe uyaziqhelelanisa nezinye izethameli? Bengikuchungechunge lwe-LinkedIn emasontweni ambalwa edlule lapho umengameli ebukela phansi elinye lamalungu esidlangalaleni. Ngangazi ngaleso sikhathi ukuthi angizange naphakade ufuna ukwenza ibhizinisi nomphathi. Mhlawumbe akakuqapheli nakancane lokho.
Qaphela imvelo yakho, idumela lakho nezithameli zakho njengoba uhlanganyela. Kungenzeka ukuthi uvala ukuhola kwakho ungaqondile noma uchithe ithuba lakho elilandelayo lebhizinisi. Izithameli eziyinhloko ohlanganyela nazo akuzona izethameli zeqiniso, yizo kuphela ezikukwazisa ukuthi zikhona. Yibo ongaboni ukuthi udinga ukubazi.
Tags: izethameliidumelaabalaleli bezokuxhumana